Tononkiran'i Solomona 2:1-15 "1 Izaho dia voninkazo eny an-tanety ihany sy lilia eny an-dohasaha. 2 Toy ny lilia eo amin’ny tsilo, dia toy izany tompokovavy havako eo amin’ny zazavavy. 3 Toy ny hazo poma amin’ny hazo any an’ala, dia toy izany ny malalako eo amin’ny zatovo. Mahafinaritra ahy indrindra ny mipetraka eo ambanin’ny alokalony, sady mamy ao am-bavako ny voany. 4 Nentiny ho ao an-tranon-divay aho, ary ny fanevany eo amboniko dia fitiavana. 5 Hatanjaho amin’ ampempam-boaloboka aho, ary velombelomy amin’ny poma aho, fa mararim-pitia. 6 Aoka ny tànany ankavia hanondana ahy, ary aoka ny tànany ankavanana hanohona ahy. 7 Mampianiana anareo amin’ny gazela na amin’ny dieravavy any an-tsaha aho, ry zanakavavin’i Jerosalema: Aza manaitra na mamoha ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. 8 INJAY, ny feon’ilay malalako! Indro, tamy izy ka miantsambotsambotra eny an-tendrombohitra Ary mitsambikimbikina eny amin’ny havoana. 9 Ny malalako dia tahaka ny gazela na ny diera tanora; Indro, mijanona eo ala-tranonay izy, mitsidika eo am-baravarankely, manarangarana eo amin’ny makarakara. 10 Niteny ny malalako ka nanao tamiko hoe: Mitsangàna, ry tompokovavy havako, ry tsara tarehiko, ka andeha ary! 11 Fa, indro, lasa ny ririnina, ritra tsy misy intsony ny ranonorana; 12 Miposaka eo amin’ny tany ny voninkazo; Tonga ny taona fanaovam-peo fifaliana, Ary re atỳ amin’ny tanintsika ny feon’ny domohina. 13 Ny aviavy mahamanitra ny voany tanora, mamony ny voaloboka ka mamerovero tsara. Mitsangàna, ry tompokovavy havako, ry tsara tarehiko, ka andeha ary! 14 E, ry voromailalako ao amin’ny tsefatsefaky ny harambato, dia ao amin’ny fialokalofana amin’ny fiakarana mideza, aoka hahita ny endrikao sy handre ny feonao aho; Fa mamy ny feonao, sady mahafinaritra ny endrikao. 15 Sambory ny amboahaolo, dia ireo amboahaolo madinika izay manimba ny tanimboaloboka; Fa efa mamony izao ny voalobotsika."
Mahavariana ny endriky ny fanehoam-pitiavana izay ifanaovana amin’ny alalan’ny fanaovana teny mampahery sy manome lanja ilay olona tiana (vady) eto. Mipetraka ho fanamby, indrindra ho antsika malagasy ny karazana fanehoam-pitiavana izay amin’ny ankapobeny manome aina, mikolokolo ny fiainan’ny mpivady amin’ny fifandraisana, ary koa mitahiry ny fifankatiavana. Mazava anefa ny filazan’ny mpanoratra momba ilay malalany. Voafidy (1-6) tao anatin’ny maro ilay malalany satria tsapany, naharesy lahatra azy fa niavaka. Nanintona azy tanteraka ary mahatamana azy foana ny hiaraka aminy. Mampametra-panontaniana hoe tsy tontan’ny ela ve izany fitiavana izany? Fa raha toy izao sary izao no endriky ny fikatsahana ny fitiavana avy amin’ Andriamanitra, dia Izy, Ilay Andriamanitra fitiavana, no hiaro ny safidy izay efa natao. Voasedra (8- 14) ny fifankatiavany noho ny tsy fahafahana mifankahita sy ny fidiran’ny hafa an-tsehatra. Fitiavana vonona sy afaka hiaritra ny sakana sy ny olana no maharitra. Fitiavana anmahandry ny fotoana efa omanin’ny Tompo. Miorina amin’ny fifampitokisana ilay fitiavana ka manala ny tahotra sy ny ahiahy rehetra (1 Jaona 4:18). Voaaro (15) amin’ny fahavalon’ny fitiavana madio sy marina mba hanomezana voninahitra hatrany ny Tompo eo amin’ny fitondran-tena rehetra ka tsy ho voataona amin’ny fijangajangana. Mahandry (7) satria tsy azo tairina raha tsy amin’ny fotoany ny fitiavana. Fampitandremana lehibe eto izany. Mandositra izay mety ho filàna ara-nofo misarika amin’ny fahotana.
Mifantoka amin’ny fikatsahana ny fahadiovam-pitondrantena no ilaina, indrindra ho an’ny tanora. Tsarovy: 1 Jaona 4:16